Kenya oo rabta in Afrika oo dhan la dagaalanto Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo rabta in Afrika oo dhan la dagaalanto Alshabaab
25th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com Wasiirka arimaha dibada Kenya, Aamina Maxamed ayaa sheegtay in Afrika looga baahan yahay iney si wadajir ah ula dagaallamaan waxa loogu yeero argagixisada.
Kenya oo deris la ah Soomaaliya oo Alshabaab xoog ku leeyihiin ayaa sanadihii lasoo dhaafayey wajaheysay weeraro Alshabaab, iyadoo labadii todobaad ee lasoo dhaafay gobolka Xeebta lagu dilaay ilaa 70 ruux oo raydi u badan.
Iyadoo ku sugan magaaladaMalabo ee caasimada dalka Equatorial Guinea, halkaasi oo uu ka furmayo kulan caalami ah ayay ka sheegtay in loo baahan yahay in wadamada caalamka iyo afrika ay si isku mid ah kaga shaqeeyaan la dagaalanka Alshabaab.
Wasiir Aamina Maxamed oo kazoo jeedda Soomaalida gobolka Woqooyi Bari Kenya, ayaa sheegtay in la joogo watigii dalalka Africa ay iska kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, iyadoo sheegtay in lagu gaari karo arimaha sirdoonka oo la wadaago si amaanka loo xaqiijiyo.
Aamina Maxamed ayaa intaa ku adrtay ineysan ku filneyn in la cambaareeyo falalka kooxaha loogu yeero argagixisada, balse loo baahan yahay dagaal wadajir ah
“Kaliya maahan inaan cambareyno inagoo aan ficil sameynaynin oo ka dhan ah argagixisada meel kasta oo ay joogaan, in badan oo isku xirnaan ah ayaa loo baahan yahay gaar ahaan dagaal wadajir ah” ayay tiri wasiirka arimaha dibada Kenya Aamina Maxamed.
Waxay sheegtay in dalka Kenya ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo dhanka amaanka ah maadaama Alshabaab ay weeraro kala duwan ay ka geystaan dalkaas.
“Wadamada Africa waa inay hadda u midoobaan arintaan, ma jirto wado kale oo wadan kastaa kaligiis uu kula dagaalamo argagixisada, waxaa nagu waajib ah inan su’aal iska weydiino taasi” ayay sidoo kale tiri Aamino.
Alshabaab ayaa hadda weeraro ku haya dalka Kenya, iyagoo horay u qaadaay weerarkii dadka badan lagu laayeey ee bishii September 2013 ka dhacay xarrunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi.
Somali Cabinet approves agreement reached by opposing sides in South West
Mohamed Fiqi Hassan to enter Lower Shabelle at will